Chinangwa changu ndechekugadzira software yekutanga kuti ndirege kunyadziswa nebasa rangu pamberi pevatengi uye kuti mutengi haafanire kushandisa mari yakawanda uye nguva kupfuura zvakafanira. Ini zvakare ndinosimbisa kusarudzika kwebasa racho pasina kukosha kwekuwana mhinduro dzakaomarara uye dzakaoma, saka mutengi haana kubhadhara chero chinhu chakawedzerwa uye basa rakaramba riri diki. Ini ndinopa masevhisi uye mashandisiro anoenderana nezvinodiwa nevatengi uye nenyaya.
DZIDZISO YOKUSIKWA -Kugadzira kwemaitiro kunogona kushandura nzvimbo yakawanda uye vashanyi vevashandisi uye vashandisi kuva vatengi. Aya ndiwo maitiro andinosvika kune ese basa nekuedza kugadzira yepakutanga chirongwa.
YEMAHARA IDEAS - Muimwe purojekiti nyowani ini ndinoedza kugadzira chimwe chinhu chitsva uye chakasarudzika, chinosangana neazvino maitiro uye zviyero, kugadzira izvo zvisina kujairika zveprojekiti yega inokwezva.
RINOGONESA DZESVONDO - Pasina nyore manejimendi echisarudzo chakagadzirwa kana chero mhinduro yesoftware, kunyangwe chirongwa chakanakisa chichafanorongerwa mukuparadza kwekutanga. Ini ndinogara ndichiedza kudzivirira izvi. Chete chirongwa chakanaka chine musoro!
SEO - Panyaya yekugadzira webhusaiti, zvinodikanwa kuti uve neiyo SEO chaiyo, pasina iyo kunyange iyo yakajeka peji peji inokwana pakati pemamiriyoni emamwe mapeji. Kana iwe uchida kuoneka mumasevhisi ekutsvaga, ini ndine mhinduro inoshanda!
KUSHANDA KWEMAKARA - Ini ndinopa vatengi vangu kutsigira kukuru, ini handifi ndakafuratira munhu. Ini ndinoedza kugadzirisa zvikumbiro zvakawanda nekukasira, kana paine dambudziko rakanyanya kuomarara ndinoyedza kutevedzera mukati memaawa makumi maviri nemana.
BURE UPDATE & SUPPORT -Zvose zvandinoshandisa zveWS zvinotsigirwa uye zvinogadziriswa zvachose pasina mubhadharo uye nekusingaperi. Izvo hazvigone kuitika kuti application rangu rinomira kushanda nekuuya kwe OS itsva.
Chinangwa changu ndechekugutsa mutengi nguva dzose kuti ndirege kunyadziswa nebasa rangu uye kuti mutengi haafanire kushandisa mari yakawanda uye nguva kupfuura zvakafanira. Panguva imwecheteyo, ini ndinosimbisa kuti basa rangu rakasiyana uye rinozadzisa izvo zvinodiwa nemutengi, pasina kukosha kwekuwana mhinduro dzakaoma kunzwisisa, saka mutengi haana kubhadhara chero chinhu chakawedzera uye mhinduro yacho yakaramba iri shoma.
Muchirongwa chitsva choga choga ndinoedza kugadzira chinhu chitsva uye chakasarudzika, chinosangana nezviri zvese zvinoitika uye zviyero, kugadzira chisina kujairika kweprojekiti yega inokwezva. Dhizaini yekugadzira inogona kushandura mazhinji vashanyi vesaiti uye vashandisi kuve vatengi. Aya ndiwo maitiro andinosvika kune ese ega mugove mutsva uye ndinogara ndichiedza kugadzira yepakutanga chirongwa.
Dhawunirodha template iyi yemahara
agency parwendo rwendo rwekufamba zororo HTML wirirana kupindura peji Mufambi dandemutande
Tags: agency parwendo rwendo rwekufamba zororo HTML wirirana kupindura peji Mufambi dandemutande